Doorashada Xiriirka Kubadda Gacanta oo lagu qabtay Muqdisho (SAWIRRO)
4:16 am - Sunday September 24, 2017
Home » Cayaaraha » Doorashada Xiriirka Kubadda Gacanta oo lagu qabtay Muqdisho (SAWIRRO)
Shirweynaha 7aad ee Xiriirka Kubada Gacanta Soomaaliya iyo doorashada hogaanka xiriirka ayaa lagu qabtay Magaalada Muqdisho ee Caasimada dalka Soomaaliya.
Shirkaan ayaa waxaa kasoo qeyb galay, Madaxda Xiriirka Kubada Gacanta, Madaxda GOS, Agaasimaha guud ee wasaarada dhalinyarada iyo sportiga Agaasimaha waaxda maaliyada ee wasaarada dhalinyarada iyo Ciyaaraha, qubaro isboorti iyo marti sharaf kale.
Shirweynahaan ayaa waxaa lagu soo bandhigay waxyaabihii 4-sano ee lasoo dhaafay u qabsoomay xiriirka, waxaana saxaafada warbixin kooban u aqriyey gudoomiyaha uu waqtigiisu dhamaaday, Maxamed Xuurshe Xasan Eenow kaas oo dhinaca kale isla xilligaasi ahaa musharaxa keliya ee u taagan qabashada xilka gudoomiyanimo ee Xiriirka Kubadda Gacanta.
Ibraahim Xuseen Cali [Roombo] oo kasocdey guddiga Olombikada Soomaaliyed isla markaana ahaa gudoomiyaha guddiga doorashada ayaa madasha ka aqriyey magacyada xubnaha ka socday kooxaha codkooda dhiibanayey ee u diiwaan-gashan Xirrirka Soomaliyeed ee Kubadda Gacnta.
Intaas kadib xubnahii ka socday lixda kooxood ee u diiwaan-gashan Xiriirka Kubadda Gacanta ayaa si aqlabiyad leh ugu codeeyay Maxamed Xuurshe Xasan Eenow, maadama aysan jirin cid kale oo tartan la gashay.
Kadib doorashada waxaa goobta ka hadlay Gudoomiyaha la doortay ee Xiriirka Soomaaliyeed Kubadda Gacanta Maxamed Xuurshe Xasan Eenow, kaasi oo u mahadceliyey dhammaan kooxihii doortay, waxuuna tilmaamay in afarta sano ee soo socota uu xiriirka xooga saari doono tartanada Kubada Gacanta, isla markaana uu doonayo in kooxaha ay gacan ka geystaan dadaalka horumarineed.
Dhinaca kale Agaasimaha waaxda maaliyada ee wasaarada dhalinyarada iyo Ciyaaraha Abuu Cali Shiiq oo isna goobta ka hadlay ayaa u hambalyeeyay (Bogaadiyey) masuuliyiinta cusub ee la doortay, waxuuna tibaxay in Wasaaradda Dhalinyarada iyo Isboortiga ay kaainteeda ka qaadan doonto horumarinta Kubadda Gacanta.
Gaba-gabadii waxaa Shirweynihii 7-aad ee Xiriirka Kubadda Gacanta soo xiray Madaxa Arimaha xiriirka GOS, Xaaji Maxamed Axmed Colow waxuuna sheegay in GOS ay soo dhaweyneyso doorashada hogaanka Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubada Gacnata, wuxuuna kooxaha Kubadda Gacanta ugu baaqay iney la shaqeeyeen masuuliyiinta ay doorteyn.
1- Maxamed Xuurshe Xasan Eenow -Gudoomiye
2- C/salaam Axmed Guuleed -G/K/X /1aad.
3- Maxamed C/llaahi Cali -K/X/2-aad
4- Shamso C/lle Maxamuud -G/K/3-aad
5- Nuur Maye Cismaan -Xoghaye
8- C/raxiin Suufi Karaama -Xubin
W/ D: Xabiib Axmed Cali
Xulka Soomaaliya oo ka qeybgalaya Tartanka Kubadda Koleyga Zone V (SAWIRRO)
Cadaani oo markale isku sharaxay qabashada Hogaanka XKKS (SAWIRRO)